avy amin'ny admin tamin'ny 20-09-05
Raha liana te hahalala bebe kokoa momba ny microswitches ianao dia eo amin'ny pejy ankavanana. Ato amin'ity lahatsoratra ity, isika dia hijery ireo karazana switch switch micro. Izany dia hanampy anao hisafidy ny singa mety mifanaraka amin'ny filan'ny tetikasa. Ity lahatsoratra ity dia hanome anao hevitra lalindalina kokoa amin'ny 6 t ...
Ny tombony ambony amin'ny switch micro tokony ho fantatrao amin'ny famokarana
Ny fampidirana ny switch micro ao amin'ny tontolon'ny fitaovana sy fitaovana elektronika dia revolisiona. Raha mpanamboatra fitaovana elektrika ianao dia afaka mijanona mialoha ny fifaninanana amin'ny fampiasana switch micro. Ny antony dia manolotra tombony be ireo fitaovana. Ao amin'ity lahatsoratra ity, isika dia ...
Ny fototry ny switch micro izay tokony ho fantatrao alohan'ny famokarana
Mety efa nahita jiro bitika tamin'ny karazana fitaovana samihafa ianao, saingy mety tsy fantatrao ny anarana feno an'ity vokatra ity. Ny teny hoe micro switch dia manondro ny switch switch-action kely. Nomena ny anarana satria ity karazana switch ity dia mitaky hery kely hamelomana. Ao amin'ity lahatsoratra ity, isika dia ...
Potsero Button Footswitch, Switch switch amin'ny herinaratra, Push Button Micro Switch, Toggle Switch Boot, Kitendry Micro Push Micro Switch No Nc Miaraka, Toggle Switch,